Vaovao - atsasaky ny volana Volana fijanonana amin'ny fingotra
Ahoana ny fitazonana ny fijanonana varavarana? Door Stop, fantatra amin'ny anarana hoe fikitihana varavarana, koa dia varavarana aorian'ny fanokafana ilay fitaovana fametrahana ny suction, mba hisorohana ny fitsofohan'ny rivotra na ny fikasihan'ny varavarana ary akatony. Ny fijanonan'ny varavarana dia mizara ho toy ny andriamby maharitra Door Stop sy ny varavarana elektromagnetika Atsaharo ny karazany roa, ny fitrohana varavarana andriamby maharitra dia matetika ampiasaina amin'ny varavarana mahazatra, azo fehezina amin'ny tanana ihany; Ny varavarana elektromagnetika dia ampiasaina amin'ny varavarana tsy mirehitra sy Windows ary fitaovana fanaraha-maso elektronika hafa, na fanaraha-maso na fanaraha-maso mandeha ho azy.
Ahoana ny fitazonana ny fijanonana varavarana? Ireto misy teboka roa manaraka dia mila marihina:
1, hisorohana ny fifandonana amin'ny fikirakirana.
2, rehefa manadio dia miezaha tsy handena ireo faritra voapetaka vy, mampiasa lamba malefaka na kofehy vita amin'ny landihazo aloha hanesorana vovoka, ary avy eo hamafa amin'ny lamba maina, maina hatrany. Aza mampiasa mpanadio miloko na manimba ny sosona amboniny.
Ny fomba manokana fametrahana ny suction varavarana dia azo alefa amin'ireto dingana manaraka ireto:
Ahoana ny fametrahana ny tongotra Stop Door
Andriamby maharitra tsy tapaka varavarana ajanony araka ny endrika fametrahana karazana rindrina nitaingina, karazana nitaingina tany, karazana plastika, karazana vy arakaraka ny fitaovana; Ny fitrohana varavarana elektromagnetika mifanaraka amin'ny fomba samihafa amin'ny vokatra fametrahana varavarana dia mizara ho karazana rindrina CT-01, karazana tany CT-02, karazana rojom-pifaneraserana CT-03 sokajy telo, ny fijanonana varavarana elektromagnetika amin'ny rindrina dia mizara ho karazana mahazatra, manandratra karazana, lava halava, karazana boaty, karazany mainty, lava karazana sandry; Ny fitrohana varavarana elektromagnetika karazana eto an-tany dia misy fitrohana varavarana elektromagnetika karazana rindrina CT-01 sy valindrihana fametrahana zoro havanana; Rindrambaiko elektromagnetika sokajy rojom-rojom-baravarana dia misy fijanonana varavarana elektromagnetika CT-01 karazana rindrina sy mpamatotra rojo; Satria ny karazana rindrina CT-01, ny karazan-tany CT-02 ary ny vatan'ny CT-03 dia mijanona eo amin'ny varavarana electromagnetic Door Stop body, dia mora ho an'ny mpampiasa ny misafidy araka ny fepetra apetraka amin'ny tranokala.